SomaliTalk.com » 2011 » December » 20
Home » Archive Maalinta December 20th, 2011
Diyaaradaha miiga ee dowlada Kenya oo galabta duqeeyey deegaanka Husiingow ee Gobolada Jubooyinka iyo dhimasho iyo dhawac gaaray dad badan oo shacab ah .
Diyaaradaha miiga ah ee dowlada Kenya oo galabta duqeeyey deegaanka husiingow ee Gobolada Jubooyinka iyo dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dad badan oo shacab ah . goobjooge Maxamed Cumar Ibraahin ayaa saxaafada u sheegay in diyaaraduhu aysan ciidan duqeyn ee ay duqeeyeen dad shacab ah ,wuxuuna sheegay in aysan heysan wax daawo iyo daryeel ah midna Diyaaradaha dagaalka ee ciidamada cirka dalka...
Shiikh Dhawaan Magaaladda Hargeysa kaga dhawaaqey Xisbi Islaami ah oo Xabsiga loo Taxaabey.
Ciidamadda Booliska Soomaaliland ayaa gacanta ku dhigey islamarkaana Xabsiga u taxaabey Shiikh Dhawaan Magaaladda Hargeysa kaga dhawaaqey Xisbiga Islaami ah oo lagu magacaabo Xisbul Allaah , markii uu ku dhawaaqayey ayuu waxaa uu qabtey Shir Jaraaid isagoo sheegey in Xisbigiisu uu doonayao in Degaanadda Soomaaliland laga hirgeliyo ku dhaqanka Shareecadda islaamka. Shiikh Maxamuud Cabdulaahi Geele...
Maan Dadeed waa mudacyo afkood waa mid ka mid ah Maahmaahda Soomaalidda, macneyn bandanna uma baahna oo waa macruuf. Ra’yiga in la isweydaarsado waa muhiim hadana in Fikradaha dadku ay is khilaafaan waa shey dabiici ah oo aan la yaab la heyn waxaase wax lala yaabo ah in qoraa Soomali magaceed wata oo misna Waaqica dhabta ah aan ka run sheegin ama si aan Cadaalad iyo dhab ka hadal ahayd wax uga qora...
Shiriif Xasan iyo wafdi uu hogaaminayo oo kadegey Caasimadda Puntland ee Garoowe
Shiriif xasan iyo wafti uu hogaaminayo oo goordhow kadegey magaalaada garoowe halkaas oo ay ku soo dhoweeyeen madax badan isaga iyo xildhibaanadii lasocdey ayaa waxaa loo gudbiyey qasrigii madaxtooyada. waxaanna lafilayaa isna inuu soo gaaro magaalada garoowe Reysalwasaare Cabdi weli. Berri oo iyana lagu Waramey in Xildhibaanadda Baarlamaanka ay Dooran doonaan Gudoomiye Cusub ——————————————————————————– Iyadoo...
Halkudheg: garoowe, Shirka
Jawaab ku socota raga ka jawaabay axaadiithtii lagu heestay sh. Xasan takar (w/q Axmad Xalaal)
Bismillaah, waxaa waayahan dambe soo ifbaxay khilaafaad u dhaxeya qaar kamida culumada soomaaliyeed, khilaafkaa wuxuu lahaa dhan iijaabi ah oo masaa’il cilmi ah leesku heesto, waxaa jirtay sheikh Shibili in uu soo bandhigay 5 xadiith oo uusan asal u heynin oo uu kamaqlay sheikh Takar, wuxuuna ka codsaday in uu axaadiithtaas meel soo saaro. Iyadoo jawaab laga sugayo sheikh Takar ayaa mid kamida shabakadaha...